Ring - cishe ngemfanelo EsiZulwini asinayo abesifazane. I umhlobiso sokuqala, nesizotha futhi bangalisebenzisi ebiza kakhulu, ladies zisengaphansi izingane zabo - nabazali bazo noma abanye esihlobene nabo abangakholwa. Khona-ke kungase kubonakale amagugu evela kubalandeli, wedding izindandatho, izindandatho stylish ... Kodwa ukuze into esefeshinini futhi enhle, kufanele ngokugcwele "Malachite Ibhokisi" hhayi kuphela. Kufanele kube kuhle ukufunda indlela ncamashi kufanele bagqoke imihlobiso yabo.
Iphuzu lokuqala yokuziphatha "Indlela uyayifaka yini indandatho esandleni sakhe," sifundeka kanje: Nakani ukuma kanye nosayizi ibhulashi iminwe. Nge ezibanzi, ezinkulu entendeni izindandatho ezidingekayo futhi amasongo okukhulu. Izacile, imihlobiso ngomusa nje "elahlekile" e namasayizi amakhulu. Kodwa izimvu zamanzi noma amatshe Kufanele kukhethwe okusaqanda noma encane kuphela. Kulokhu, bona zibukeke kwelule iminwe uyonika ibhulashi oyifunayo futhi isicwebezelisi ahlukile. Lapho encane, isibambo ethambile kufanele nje wenze okuphambene. Futhi nangu impendulo yombuzo othi: "Indlela uyayifaka yini indandatho esandleni sakhe," kuyoba kanje. Zonke okwengeziwe omkhulu agcizelele fragility shayela, ngisho imnike ubuhlungu abanye. amatshe Okusaqanda ngokwandisa ubude iminwe, isandla izobukeka a esishwabene inkukhu izinyawo - ukuthi kule enhle? Kodwa ngomusa, nezinsimbi mncane ikhala amatshe round noma izimvu zamanzi sikhulise ubuhle bakhe nesisa. Futhi kuze kube manje sigqoke amagugu!
Jewellery futhi tsvetotip
Wochwepheshe, abaklami, izikhotha lizwakalise iphuzu yokuziphatha yesibili "Indlela uyayifaka yini indandatho kwi esandleni" kanje: imigexo kumele akhethwa ngokusekelwe tsvetotipa yayo. Ukuze entwasahlobo, isibonelo, igolide efanelekayo - njengoba zohlobo olulodwa, futhi inhlanganisela ezihlukahlukene ezazenziwa. Zamatshe - inhlaka, isafire, itherkhoyisi, pink amapharele efudumele. Kodwa nezinsimbi esiliva agqoke iminwe kungcono ukuba adede - asihambisani! Ukuze 'ehlobo' abesifazane Indlela uyayifaka yini indandatho esandleni sakhe? imikhiqizo Main impahla kumele kube "metallic" umbala, ngamanye amazwi, gold white, isiliva ne-platinum. Amatshe ubisi, ukukhanya, "abandayo" imibala: agathe, eliyigugu i-opal, amadayimane, aquamarines. Ladies ekwindla suit uhlobo imihlobiso "solar" metal "efudumele" namaminerali elikhanyayo nge ucwebezela ngendlela ekhangayo waxy - inhlaka, zamakhorali, itopazi. A ledi- "ebusika" okuthwala bonke ekhanya, imibala ayegcwele kanye shades kwamatshe.
On okuyinto umunwe ukugqoka
Umthetho wesithathu ikhodi abathandi izimiso zokuhle imigexo elikuyalayo ngempela bavumelane inombolo kanye nohlobo ubucwebe furnishings isitayela sokugqoka. Okungukuthi, amadayimane futhi ibe ngeyamarubi, emeralds nezinye amatshe abizayo futhi ephezulu ukubaluleka efanelekayo ngoba isimo saleli ubusuku zokubhukuda zemikhosi. Kodwa amagugu kukhona elula, ezincane - kwansuku futhi ibhizinisi imvelo. Futhi-ke, kukhona ukukhathazeka esisemthethweni - lokho perstenki lapho iminwe kufanele igqoke. Lapha kukhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. I indandatho yomshado Orthodox esigqokwa ngakwesokunene, amaKatolika - ngakwesokunxele. Jamal ezimweni zombili - iringi. Uma umuntu ongumfelokazi noma ohlukanisile - kuziwa phakathi force kungenye yesiko. Nokho, kulesi simo, acabangele izisusa zenkolo. AmaKristu obu-Orthodox abelokhu olulodwa, ngaphambilini ayifake yini indandatho esandleni sakhe sobunxele, amaKatolika - ngakwesokudla. On the umunwe phakathi, ngokuvumelana abezenhlalakahle, ukugqoka imigexo imvelo uyaziqhenya, kugcizelelwa ngenhlonipho. Futhi iringi emikhulu futhi liyinkimbinkimbi ngaphezu, kulapho oludonsa e uhlamvu. Kodwa "ringed" umunwe - Inkomba kanye samodurskih ukuzishaya wobushiqela. Kodwa lesi sibonakaliso akusho umnikazi zizwakale kahle! Nokho, umunwe kancane. Hlobisa ke - ukwenza kucace ku okuqondene yakho emhlabeni bogemy.Tak Bafaka izindandatho efana abalingisi, le Ezivamile kwezwe show ibhizinisi, yaseshashalazini-goers, abaculi, ngamanye amazwi, abamele abezindaba art.
Nakuba incazelo enengqondo kakhulu ukuthi kungani sigqoke kuba indandatho-ke kule umunwe - ahambisane ngobukhulu!
Ihange futhi armored aluka amaketanga zegolide nezesiliva
Microfinance izikhungo: ohlwini. Microfinance isikhungo - kungcono ...
Indlela kabusha inombolo ehlukile. Idlulisela kwenye inombolo MTS, "Beeline", "Tele2"
Inhlangano kwezokuvakasha: ezokungcebeleka, kwenziwe kuhambisane netinhloso